तिम्रो बच्चा को बाउ को हो ? भन्नेहरुलाई कांग्रेसकि संसद नुसरतले दिइन् यस्तो कडा जवाफ – Sunaulo Nepal TV
तिम्रो बच्चा को बाउ को हो ? भन्नेहरुलाई कांग्रेसकि संसद नुसरतले दिइन् यस्तो कडा जवाफ
एजेन्सी । पछिल्लो केहि बर्षहरुमा अभिनेत्री र राजनीतिज्ञ नुसरत जहाँ को व्यक्तिगत जीवन धेरै विवादमा रहेको छ। उनले सबैलाई चकित पारे जब उनले घोषणा गरे कि उनी २०१९ मा टर्कीमा विवाह पछि पति निखिल जैनबाट अलग भइरहेकी छिन्। नुसरत जहाँको नाम उनको सह अभिनेता यश दासगुप्ता संग जोडिन थाल्यो ।
नुसरत जहाँले अगस्टमा छोरालाई जन्म दिईन् । अस्पतालवाट घर फर्कदा नुसरतको बच्चा यशले नै हातमा लिएका थिए । उनी नुसरतसंगै देखिएका थिए । त्यसैले पनि थप शंका गर्न थालियो । अहिले सम्म नुसरतले सन्तानको बुवाको बारेमा खुलासा गरेकी छैनन् । उनी यस बारेमा बताउन पनि चाहन्नन् । नुसरत सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल भइरहेकी छिन्।
अब नुसरतले ट्रोलको जवाफ दिँदै एक महान क्याप्शनको साथ उनको फोटो साझा गरेकी छिन्। अभिनेत्री र राजनीतिज्ञले लेखेकी छिन्, ूजसलाई तपाइँ परामर्श गर्नुहुन्न उनीहरुबाट आलोचना स्वीकार नगर्नुहोस्।ू यसको साथमा, उनले न्यूरोल, न्यू लुक जस्ता ह्यासट्याग प्रयोग गरेकी छन्। उनले ड्याडीलाई फोटोमा शिष्टाचार दिएकी छन् । यो पोस्ट सेयर गरेपछि पनि ट्रोलले नुसरतलाई नि शा ना बनाउन थाले र ुड्याडीु को बारेमा सोध्नुभयो उनी को हुन् ?
यश दासगुप्ताले नुसरतको सन्तानको जन्मको खबर साझा गरेका थिए। उनले भनेका थिए कि आमा र बच्चा दुबै स्वस्थ छन्। उनले अस्पताल छोड्दा बच्चालाई आफ्नो हातमा समातेको देखिएको थियो।
केही रिपोर्टमा दाबी गरिएको छ कि अभिनेत्रीले अस्पताल बाट अनुरोध गरेकी थिईन् कि यश डिलीवरी को समयमा उनको साथमा रहनेछन्। अर्कोतर्फ, निखिलले बच्चाको जन्म पछि एक सन्देश पनि दिए। उनले भनेका थिए कि उनीहरु संग मेरो मतभेदले पनि मलाई नवजात शिशु को लागी शुभकामना को लागी रोक्न सक्दैन। म उहाँलाई शुभकामना दिन्छु। बच्चा सुपर स्वस्थ र एक राम्रो भविष्य होस्।
Previous हातमा रहेका यी रेखाहरु दुर्भाग्यको एक संकेत, धेरै कठिनाइहरु आउन सक्छन्
Next के हो पर्सनालिटी ए ? यस्ता ब्यक्तिलाई हुन्छ हृदयघातको खतरा